Toamasina, Antsiranana, Antananarivo: famokarana zezika sy saribao ekolojika | NewsMada
Toamasina, Antsiranana, Antananarivo: famokarana zezika sy saribao ekolojika
Havadika hitondra lanja ara-toekarena amin’ny fampandrosoana ny fako. Hatao fitaratra ny fanodinana azy any Toliara sy Mahajanga, ary tohizana any Antsiranana, Toamasina ary Antananarivo.
Na eo aza ny tranga Covid-19, manana fanamby goavana ny minisiteran’ny Tontolo iainana sy ny fampandrosoana lovainjafy, amin’ity taona 2020 ity. Nambaran’ny minisitra Raharinirina Baomiavotse Vahinala fa tafiditra ao anatin’izany ny hanodinana ny fako, indrindra ny ao an-tokantrano, mba ho lasa fanoitra ara-toekarena hitondra fampandrosoana. Toerana telo no hanaovana azy, toy ny any Toamasina, Antsiranana ary eto Antananarivo.
Efa mandeha hatrany amin’ny 70% ny fananganana ny toeram-panodinana any Toamasina, vinavinaina ho vita amin’ny septambra. Mandeha hatrany amin’ny 30% ny any Antsiranana, heverina ho vita mialoha ny faran’ny taona. Efa atao koa ny fanadihadiana ho an’Antananarivo, ary ho toy ny ataon’ny orinasa tsy miankina iray any Fianarantsoa. Izany hoe, tsy maintsy hisy ny fako tsy azo ahodina halevina any ambanin’ny tany.
Tohizana any amin’ny distrika
Nanamafy ny minisitra fa anisan’ny tanjon’ny filoha Rajoelina, ny hananganana orinasa hiteraka asa ho an’ny tanora. Hatao filamatra ny any Toliara sy Mahajanga. Tsy haodina ho zezika sy karazana bolongam-bato (autobloquant) fotsiny ny fako fa hanamboatra saribao ekolojika avy amin’ny fako ihany koa.
Tombanana 2,5 miliara Ar isaky ny foibe ny tetibola hananganana azy ireo. Tanjona ny hanohizana ity fandaharanasan’ny minisitera ity any amin’ny disitrika manerana ny Nosy ihany koa.